Ganacsiyada Online-ka ah waxay u Baahan Yihiin inay u Wareejiyaan Suuqgeynta Si ay Horay Ugu Sii Jiraan | Martech Zone
Su’aal kama taagna in Internetku si aad ah isu beddelay sannadihii la soo dhaafay, taasina waa run sida ay shirkadaha u suuq geynayaan ganacsigooda internetka sidoo kale. Milkiile kasta oo ganacsi wuxuu u baahan yahay oo kaliya inuu eego tirada isbeddelka Google ku sameeyay raadinta algorithm si uu u helo faham aasaasi ah oo ku saabsan sida farsamooyinka suuqgeynta internetka ay isu beddeleen waqti ka dib.
Shirkadaha ka ganacsada internetka waxay u baahan yihiin inay door bidaan istiraatiijiyadooda suuq geyn markasta oo ay jiraan isbeddel ku yimaada algorithms-ka raadinta, ama waa laga tagi karaa ilaa halka ay iibintooda ku dhibtoonayaan. Bob Holtzman ee Mainebiz.com wuxuu si qayaxan u dhigayaa:
“Internetku si dhakhso leh ayuu isu beddelayaa oo wixii sannad ka hor shaqeeyay ayaa laga yaabaa inay hore u sii habaysnaadaan - taasina waxay sharxi kartaa suuqgeynta khadka tooska ah tobankii sano ee lasoo dhaafay. Isla markii shirkadaha qaar ay aakhirkii dhiseen websaydhkoodii ugu horreeyay, warbaahinta bulshada ayaa bilaabay inay qabsadaan kubbadaha indhaha oo ay ka dhigayaan kuwa ka dambeeya gooldhalinta inay u muuqdaan kuwo qadiim ah ama aan khusayn.
Dhamaadkii ku soo galay Facebook-ga waxay is arkeen goor dambe xafladda Twitter-ka, sidoo kale. Markii ay bilaabeen qaar ka mid ah bogagga internetka inay dhexgalaan warbaahinta bulshada, aaladaha mobilada ayaa qasbaya isbadal badan oo la taaban karo oo ku yimid naqshadeynta goobta, dhismaha, iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay.
Isbadalkii ugu dambeeyay
Xilligan, ganacsiyada khadka tooska ah waxay ka falcelinayaan isbeddellada ku yimid natiijada ka dhalatay cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Google, ee loo yaqaan Hummingbird. Ujeedada isbeddelka algorithm wuxuu ahaa in laga beddelo qaar ka mid ah miisaanka raadinta ereyga muhiimka ah loona beddelo raadinta wadahadalka ee raadinaya jawaabaha su'aalaha tooska ah.
Google waxay sheegtay inay rabto inay dhiirrigeliso waxyaabaha (websaydhada) kuwaas oo awood u leh inay ka jawaabaan su'aalaha isticmaaleyaasha, sidaa darteed waxyaabahaagu ma noqon karaan oo keliya kor u qaadista wax soo saarka ama sumadda. Waa inay noqotaa wax marka hore la muujiyo inay qiimo leedahay. Marka aasaaskan la dhiso, farsamooyinka suuq-geynta ayaa lagu dabaqi karaa si loo wareejiyo bartaada iyada oo aan aad loo dhaafin.
Tusaale waxtar leh
Ka qaado boggan Cleveland Shutters tusaale ahaan. Cinwaanka bogga ayaa u dhigan: Daaqadaha bay? Ma u baahan tahay xal shaqeynaya? Isla markiiba fiidkii, shirkaddu waxay muujisay inay wax ka qabanayso arrin laga yaabo inay daawadayaashu yeeshaan.
Hadda waxa ka dhigaya boggan mid gaar ah ayaa ah in shirkaddu aysan u raacin derbi weyn oo qoraal ah si ay u sharaxdo waxa uu qofku ku sameyn karo daaqadda gacanka; waxay u muujisay booqdaha sawirro taxane ah oo muujinaya xallinta dhibaatada. Qofka laga yaabo inuu u yimaado raadinta jawaab kaliya ma heli karo, laakiin isaga ama iyadu way arki karaan sida alaabada Cleveland Shutters ay xal u yihiin iyadoon lagu dhicin xayeysiin dhaqameed.
Saamaynta sii kordheysa ee mobilka
Khubarada ayaa sidoo kale sheegaya in tirada sii kordheysa ee mobilada ay hubaal saameyn weyn ku yeelan doonto suuqgeynta mustaqbalka. “Barta ugu dambaysa ee baaritaanka lagu sameeyo aaladaha moobaylka marka loo eego kumbuyuutarrada taagan waxay ku imaaneysaa si ka dhakhso badan sida ay dad badani u maleynayaan,” ayuu yiri Injineerka Raadinta ee Google Matt Cutts. "Layaabi maayo haddii aan dhakhso u qaadno xawaaraha bogga moobilka xisaabta SEO."
Natiijo ahaan, miisaaniyadaha loogu talagalay dadaallada suuqgeynta moobiilka waxay kordheen boqolkiiba 142 intii udhaxaysay 2011 iyo 2013. Inta badan tan waxay kubilaabataa nashqad mobile-saaxiibtinimo ah websaydhka shirkadda, taas oo ay inta badan iska indhatiraan ganacsiyada internetka.
“Mobaylada shabakadaha moobiilku waa farabadan oo dalbanaya. Hadday booqdaan boggaaga oo aan loo hagaajinaynin aaladda ay adeegsanayaan iyo siyaabaha kala duwan ee ay u dhaqmaan dadka isticmaala mobilada, way niyad jabi doonaan oo way bixi doonaan, ”ayuu yidhi Ken Barber, madaxweyne-ku-xigeenka suuqgeynta mShopper.com.
In kasta oo isbeddelladu dhab ahaan is beddeli doonaan, hal shay oo Google uusan weligiis ka habaabin ayaa ah muhiimadda ay leedahay waayo-aragnimo adeegsade tayo leh oo ah qodobka ugu muhiimsan ee qiimeynta bogagga natiijooyinka raadinta. Bixinta waxyaabo qiimo leh iyo siinta martida, labadaba miiska iyo moobiilka, oo leh khibrad qani ah, khibrad soo jiidasho leh waa labadaba xeelado aan waligood ka bixi doonin qaabka.